Is buyingahome always better? | Housing | Finance & Capital Markets | Khan Academy - Pgljapan
. ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ် ကျွန်တော် အခုခေါင်းစဉ်နဲ့ သွေဖယ်တဲ့ စကားလေးနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ် ကျွန်တော့်အထင်တော့ ဒါဟာ မည်သူမဆိုအမှန်တကယ်ကြည့်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရေးကြီးဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကျွန်တော် သွားတဲ့ ပါတီအားလုံးကို ကျွန်တော့်မိသားစုလိုပဲ မြင်တယ် ယခု ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ကယ်လ်လီဖိုးနီးယား မြောက်ပိုင်းမှာ နေပါတယ် ကျွန်တော်တို့ အိမ်ငှားနေကြပါတယ် ကျွန်တော် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော့်မှာ မိသားစုဝင်တွေရှိပါတယ် သင်ဘာကြောင့် အိမ်မ၀ယ်နိုင်ရတာလဲ သင်ဟာ ဘ၀ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ရှိနေပါတယ် ဒါဟာဆိုရင် အဓိကကျတဲ့ ဘ၀မှတ်ကျောက်ပါပဲ အိမ်ဝယ်ဖို့က ဖိအားတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေ မေးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် ပြန်ဖြေလိုက်တာက ငါ မ၀ယ်သေးဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က အိမ်ဈေးတွေ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကို တစ်ရာရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ထင်နေလို့ပါပဲ ဘာကြောင့် သူတို့ဈေးတွေ ပြန်ကျလိမ့်မယ်ဆိုတာကို မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ ကျွန်တော် ဆွေးနွေးတင်ပြတဲ့အဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ဆောင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်တွေဆီ ကျွန်တော်ကြားခဲ့တာ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေက တင်ပြချက်တွေကို ပယ်ချမယ်ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က သင့်ကိုလုံး၀၀ယ်စေချင်လို့ပါပဲ ကောင်းပြီ အိမ်ငှားခြင်းထက် ၀ယ်ခြင်းက ပိုမကောင်းဘူးလား သင်မှာ အပေါင်စာချုပ် သို့မဟုတ် နေထိုင်ဖို့အိမ်အတွက် ပိုက်ဆံချေးမယ်ဆိုရင် လတိုင်းဘဏ်မှာ ပိုက်ဆံသွင်းတယ်ဆိုတာဟာ ပိုက်ဆံစုဆောင်းခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ ဒါတွေဟာ ပညာရှိတဲ့ အတွေးခေါ်အယူအဆက လာတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ဒါဟာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် သင် အိမ်ငှားနေစဉ်အတွင်းမှာ ပိုက်ဆံက လေဟာနယ်ထဲမှာ ပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲ ဖြစ်တယ် ဒီဗီဒီယိုမှာ ကျွန်တော် ဒီယူဆမှုထဲကပဲ အလုပ်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် အမှန်တကယ်အားဖြင့် ဒါဟာ ကိစ္စလေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော့်မှာ ရွေးချယ်မှုရှိတယ်လို့ ဆိုကြပါစို့ အိမ်နှစ်အိမ်ရှိတယ် ဆိုပါစို့ . ဒါဟာ အိမ်နံပါတ် ၁ ပြီးတော့ ဒါဟာ အိမ်နံပါတ် ၂ သူတို့ဟာ ချွတ်စွတ်တူနေတဲ့ အိမ်တွေပဲ ဆိုကြပါစို့ ကျွန်တော်နေတာကတော့ အိပ်ခန်း ၃ခန်း၊ ရေချိုးခန်း ၂ခန်းရှိတဲ့ စီလီကွန်တောင်ကြားက မြို့ပြနေရာလေးဖြစ်ပါတယ် အဲလိုမျိုး အိမ်မှာ ကျွန်တော်နေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်နေတဲ့ အိမ်နဲ့ သိပ်မကွာခြားနားပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိမ်တွေက တူနေလို့ပါပဲ အဲ့လိုနေရာမှာနေတာဟာ တူညီတဲ့ အတွေ့အကြုံပဲ ဖြစ်တယ် ကျွန်တော် ဒီအိမ်ကို တစ်လ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ နဲ့ ငှားနေနိုင်ပါတယ် ဒါမှမဟုတ်ရင် ကျွန်တော် ဒေါ်လာ ၁ မီလီယံနဲ့ ဒီအိမ်ကို ၀ယ်နိုင်ပါတယ် အခု ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘဏ်အကောင့်အကြောင်း ပြောကြရအောင် ကျွန်တော့်မှာ ဒေါ် ၂၅၀၀၀၀ ရှိတယ်ဆိုပါစို့ အနာဂတ်မှာ ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင် ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်စုပြီးပြီဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင် ဒါဆို အနာဂတ်မှာ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ ကျွန်တော် အိမ်ငှားနေပါတယ် တစ်နှစ်တစ်ခါ ပိုက်ဆံပေးတဲ့အခါ ကျွန်တော့်အိတ်ထဲက ပိုက်ဆံဘယ်လောက် ထွက်သွားတယ်ဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင် တစ်နှစ်မှာ ကျွန်တော် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ပေးရတယ် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ကို ၁၂ လနဲ့ မြှောက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တာ် ဒေါ်လာ ၃၆၀၀၀ ဆုံးရှုံးတယ် ဒါဆို ကျွန်တော် အရှုံးလက္ခဏာပေါ်နေလိမ့်မယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ အိမ်ငှားတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် သုံးလိုက်လိုိ့ပါ တစ်နှစ်မှာ အိမ်ငှားခက ဒေါ်လာ ၃၆၀၀၀ ဖြစ်နေလို့ပဲ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော့်မှာ ဘာမှလုပ်စရာမရှိသောကြောင့် ဘဏ်မှာသွင်းဖို့ ကျွန်တော် အဲဒါနဲ့ အိမ်မ၀ယ်ခဲ့ဘူး ကျွန်တော် ဘဏ်မှာ စုနိုင်တယ် ဆိုကြပါစို့ ကျွန်တော် CD ထဲကို ထည့်တယ် ဆိုပါစို့ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ၄% ရလာတယ် ၂၅၀ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ် ဒါဘာလဲ ငါထင်တာကတော့ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ပဲ အဲဒါက ၀.၀၄ ဖြစ်တယ် အမှန်ပဲ ကျွန်တော် တစ်နှစ်ကို အတိုး ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ရတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ရတယ် ဒီတော့ တစ်နှစ်ကို အတိုး ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ပေါင်းထည့်လိုက်တယ် ကောင်းမွန်တဲ့ရာသီဥတုဖြင့် စီလီကွန်တောင်ကြားမှာ နေထိုင်ခြင်းရဲ့ အထူးအခွင့်အရေးကတော့ နှစ်တိုင်း ကျွန်တော့်အိတ်ထဲက ဒေါ်လာ ၂၆၀၀၀ ထွက်နေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာ အလားအလာကောင်းတစ်ခုပါပဲ ကျွန်တော့် မိသားစုတွေ ပွဲစားတွေ စက်ရုံ အပေါင်စာချုပ်တွေရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့် ဒေါ်လာ ၁ မီလီယံနဲ့ ကျွန်တော် အိမ်ဝယ်လိုက်ရမှာလား ဒေါ်လာ ၁ မီလီယံနဲ့အိမ်ဝယ်တဲ့ လူအများစုက ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀၀ ထက် များနေလို့ပါပဲ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀၀ပဲ ရှိတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒေါ်လာ ၇၅၀၀၀၀ ချေးဖို့လိုအပ်တယ် ဒီတော့ ကျွန်တော် ဒေါ်လာ ၇၅၀၀၀၀ တန် အပေါင်စာချုပ်လုပ်လိုက်တယ် ကျွန်တော် ဒီအယူအဆနည်းနည်းနဲ့ သွားနေတယ် အနာဂတ် အစီအစဉ်မှာတော့ ဒီထက်ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးတာလေးတွေ လုပ်ဖို့ရှိပါတယ် အပေါင်စာချုပ်အများကြီးမှာ သင်ဟာ လစဉ်ငွေပေးချေသောအခါ သင်ဧ။် လစဉ်ပေးငွေဟာဆိုရင် အစမှာတော့ သင့်ချေးငွေရဲ့ အတိုးသာသာဖြစ်ပါတယ် ပြီးနောက် သင့်ရဲ့ ချေးငွေပမာကို လျော့ချရန် အတွက် အတိုးအနည်းငယ် ပိုပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် အဲလို ပေးချေရခြင်းဟာ စည်းမျဉ်စည်းကမ်းလို့ ခေါ်ပါတယ် ချေးငွေရဲ့ အတိုးကိုသာ သင်ယူနိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အတိုးပမာဏက အတူတူပါပဲ အဓိကအားဖြင့် သင်သာ နှစ်သုံးဆယ်အပေါင်စာချုပ်ကြီးအတိုင်းသာ သွားနေမယ်ဆိုရင် သင်လစဉ်လတိုင်းပေးနေတာဟာ ဆိုရင် သင်ပေးရမယ့် အတိုးထက် နည်းနည်းပိုများပြီ ဒီပမာဏကို လျော့ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီအဆိုရဲ့ အရှင်းလင်းဆုံးပုံစံကတော့ အပေါင်စာချုပ်ရဲ့ အတိုးအတိုင်းသွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် တခြားအပိုဆုငွေတွေနဲ့ အကြွေးဥပဒေကို ချေဖျက်ရန် ဖြစ်ပါတယ် အဲဒါဟာ တူညီတဲ့ အယူအဆတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် အခု ကျွန်တော်သာ ၂၅% လျော့ချမယ်ဆိုရင် ဒေါ်လာ ၁ မီလီယံ အိမ်ကို ၀ယ်ယူပြီး ဒေါ်လာ ၇၅၀၀၀၀ အပေါင်စာချုပ် ကျွန်တော်မှာ ရှိမှာ ဖြစ်တယ် ဘယ်ဟာက ကောင်းတဲ့ စံနှုန်းလဲဆိုတာ ကျွန်တော် မသိဘူး ၆%လား ၆% အတိုးအကြောင်း ပြောကြရအောင် ကျွန်တော် အတိုးအနေနဲ့ပဲ ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်လောက်ပေးပြီးပြီလဲဆိုတာ ကျွန်တော်က ဒေါ်လာ ၇၅၀၀၀၀ ကို ၆% အတိုးနဲ့ တစ်နှစ်တစ်ခါ ပေးရမယ် ဒါကြောင့် ဒေါ်လာ ၇၅၀၀၀၀ ရဲ့ ၀.၀၆ ဆဟာဆိုရင် အတိုး ဒေါ်လာ ၄၅၀၀၀ နှင့် ညီမျှပါတယ် ဒါဟာ ကျွန်တော့်အိတ်ထဲက ထွက်တဲ့ ပိုက်ဆံပဲ ဖြစ်ပါတယ် လစဉ်ငွေပေးချေမှုဟာဆိုရင် တစ်လတစ်ခါ အတိုးကို အတွေးအခေါ်တစ်ခုအသစ်ရလာရန် ဆိုလိုနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ဟာ တစ်လကို အတိုး ဒေါ်လာ ၃၇၀၀ ၊၃၈၀၀ လောက် ပေးချေနေရပါတယ် အမှန်တကယ်အားဖြင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ချေးငွေစာချုပ်တွင် တစ်လကို ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ လောက် တခါတရံပေးချေနေရပါတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က အတိုးပေးနေရပါတယ် ချေးငွေရဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခုလုံးအနည်းငယ်လျော့ကြစေခြင်း ဖြစ်တယ် ဒီအကြွေးအကုန်လုံး ကျေရန် နှစ် ၃၀ လောက် ကြာမယ် အချိန်ကြာသွားရင် အတိုးတွေ နည်းလာပြီး စည်းကမ်းတွေ များလာမယ် အရှင်းဆုံးပုံစံကတော့ ကျွန်တော်ပေးချေနေတဲ့ အတိုးပုံစံပဲ ဖြစ်တယ် တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၄၅၀၀၀ ကျွန်တော် ပါတီတစ်ခုတွင် စကားပြောသောအခါ ဒီလိုပါပဲ အတိုးပေးချေခြင်း စာချုပ်ဟာ အတိုးမပေးချေမီ သတိပြုရမည့် အရာဖြစ်တယ် အတိုးမပေးချေမီ ကောက်ချက်ချခြင်းဆိုသည်မှာ ငွေပမာဏကို ကျွန်တော့်ရဲ့ စာချုပ်ပေါ်မှာ အတိုးငွေအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းပဲ ဖြစ်တယ် ကုန်ကျစရိတ်တွေကို ကျွန်တော့်ရဲ့ လခကနေ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော် အမှန်တကယ် ရရှိခဲ့တဲ့ ဒေါ်လာ ၄၅၀၀၀ ထက်နည်းတယ်ဆိုတာကို IRS ကို ပြောနိုင်ပါတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အတိုးမပေးမီ ၃၀%ကို ပြောကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်အရာက ငွေကို ထိန်းသိမ်းနေတာလဲ ၃၀% ကို ကျွန်တော် ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ် ကျွန်တော် ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ကို အခွန်အတွက် ပေးချေရမှာ ဖြစ်တယ် အဲဒါဟာ ဘယ်လိုအလုပ်လဲ ကောင်းပြီ စဉ်းစားကြရအောင် ကျွန်တော် တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ရှာနိုင်တယ်လို့ ပြောကြပါစို့ ပုံမှန်အားဖြင့် ၃၀% ပေးချေရမယ် သာမန်အားဖြင့် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀၀ အခွန်ပေးရမယ် ဒါအမှန်ပဲ အိမ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ကောက်ခံတဲ့ အခွန်မရှိလျှင် အခုတော့ ကျွန်တော့်မှာ အတိုးတွေ ရှိနေတယ် အမှန်တကယ်တော့ ကျွန်တော် တစ်နှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၅၅၀၀၀ ရှာနိုင်တယ်လို့ IRS ကို ပြောတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့ အခွန် ၃၀% ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပြောကြရအောင် တကယ်တော့ ဒီအခွန်တွေသာ လျော့ကျသွားမယ်ဆိုရင် အရှင်းဆုံးပုံစံကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အခွန်က ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ရှိတယ်လို့ ယူဆရပါတယ် အခု ကျွန်တော်က IRS ကို ဒေါ်လာ ၁၆၅၀၀ ပေးနေရပါတယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော် အကောက်အခွန်တွေ ဘယ်လောက်များများစုမိနေပြီလဲ . ၀င်လာမယ့် ဒေါ်လာ ၄၅၀၀၀ ကို ကောက်နုတ်ပြီး အကောက်ခွန်ဒေါ်လာ ၁၃၅၀၀ ကိုစုဆောင်းရမယ် ဒါကြောင့် ဒေါ်လာ၁၃၅၀၀ ပေါင်းထည့်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောကြရအောင် ယခု ၄င်းညီမျှခြင်း အတွက် ဘာဖြေရှင်းရန် ရှိသေးလဲ အတိုးဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀၀ ကို ကျွန်တော်ရနိုင်လား ကောင်းပါပြီ၊ မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော် အိမ်အတွက်ပေးငွေ ကို လျော့ ချတဲ့အသုံးစရိတ်ကို အသုံးပြုရမယ် ဒါကြောင့် ကျွန်တော်မှာ အတိုးရမယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး သို့သော်ကျွန်တော်မှာရှိတာက၊ ကျွန်တော်ကုန်ပစ္စည်းတွေ အတွက် အကောက်ခွန် ပေးချေရမယ် ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဆိုလျှင် အိမ်ခွန်ကို ၁.၂၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ပေးဖို့ ရှိတယ် ထို့ကြောင့် ၁.၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပဲလား ဒါကြောင့် အခွန်ဆိုတာ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အခွန်ပါပဲ အမှန်တကယ်အားဖြင့် အကောက်ခွန်ကို နုတ်ယူမယ်ဆိုလျှင် ၀.၇၅% သို့မဟုတ် ၁% ဖြစ်လာလိမ့်မယ် အရိုးရှင်းဖြင့် ၁%အကြောင်း ပြောကြရအောင် Property taxes. So 1% times $1 million. That equals what? 1% of $1 million is
another $10,000ayear in property taxes. And notice, I'm not talking
pay principal. I'm just talking about money
that's being burned by owning this house. So what is the net effect? I havea$13,500 tax savings. I have to pay $10,000 —
we're gettingalittle bit of income tax savings on
the $45,000 of interest that just goes out the door. So I'm paying $41,500. Notice, none of this $41,500
years ago said, oh, but houses appreciate. And that's what would
— we know that that's not the case. And in the next video, I'll
delve into this, andalittle bit more. I'll see you soon.
← Ukraine War – Communist party statement caused fist fight in Verkhovna Rada in Ukraine
Social Media Revolution 2016 →
36 thoughts on “Is buyingahome always better? | Housing | Finance & Capital Markets | Khan Academy”